Internships - Serivisy ara-dalàna an'ny fanjakana Prairie
FAMPANDROSOANA NY MPIANATRA LALANA
Ny Prairie State dia mampiantrano tsy tapaka ny taom-pianarana sy mpianatra lalàna amin'ny fahavaratra any amin'ny biraony tsirairay avy (Bloomington, Galesburg, Joliet, Kankakee, Ottawa, Peoria, Rockford, Rock Island, Waukegan, Woodstock, ary West Suburban), ary ireto tetikasa manokana manaraka ireto. : Fanampiana ara-dalàna ho an'ny Tetikasa tompon-trano (Chicago Andrefana sy Waukegan); Klinika momba ny hetra ambany fidiram-bola (Chicago Andrefana); ary Fair Housing Project (Waukegan, Rockford, ary Peoria).
Inona no hataoko?
Ireo mpianatra lalàna dia manao adidy isan-karazany ao amin'ny Prairie State miankina amin'ny zavatra niainany sy ny filan'ny birao na tetik'asa iray manokana. Ireo adidy ireo dia mety misy ny resadresaka ifanaovan'ny mpanjifa sy ny fanadihadiana tranga; fandrafetana ny fitalahoana, ny fahatsiarovana ary ny fampahalalana fohy; fikarohana ara-dalàna; ary fifampiraharahana. (NAOTY: Ireo mpianatra lalàna manana fahazoan-dàlana voafetra eo ambanin'ny Fitsarana Tampony ao amin'ny Fitsarana Avo 711 dia hanana fotoana hanatrehana ny fitsarana amin'ny fanjakana.) Ny mpisolovava efa za-draharaha dia manara-maso. Prairie State dia manome fotoana fampiofanana matetika amin'ireo mpiofana.
Prairie State dia mahatakatra fa mpianatra maro izay mitady hiasa amin'ny toerana misy ny tombontsoam-bahoaka no tsy afaka manaiky toerana tsy voaloa. Miara-miasa amin'ny PILI sy ny mpamatsy vola hafa, afaka manolotra toerana voafetra ho an'ny mpianatra manan-dalàna izahay; ny isany sy ny toerana misy ireo toerana ireo dia miovaova arakaraka ny fahafahan'ny famatsiam-bola ankehitriny. Prairie State dia mandray ihany koa ny fangatahana fiofanana ho an'ny mpianatra avy amin'ny lalàna izay manana famatsiam-bola ivelany na mitady mari-pankasitrahana any an-tsekoly, na maniry hanao asa an-tsitrapo fotsiny ny fotoanany.
Raha te hangataka fianarana ho mpianatra lalàna, miverena amin'ity pejy ity mandritra ny varavarankelin'ny fangatahana misokatra, eo anelanelan'ny 15 Desambra sy 15 Febroary.. Raha manana fanontaniana ianao dia azonao atao ny mifandray amin'ny mpandrindra internship ao amin'ny Prairie State raha mila fanazavana fanampiny ao amin'ny [email voaaro].
Fampiharana Intern Summer
FAMPANDROSOANA AN'NY UNDERGRAD SY PARALEGAL
Prairie State dia mandray ny taom-pianarana sy ny mpianatra mandritra ny fahavaratra isaky ny birao ao aminy (Bloomington, Galesburg, Joliet, Kankakee, McHenry, Ottawa, Peoria, Rockford, Rock Island, Waukegan, ary West Suburban), ary ireto manaraka ireto tetikasa manokana: Legal Fanampiana ho an'ny tetik'asa manana trano (West Chicago sy Waukegan); Klinim-pianakaviana ambany karama (West Chicago); ary Tetikasa fananganana trano sahaza (Waukegan, Rockford, ary Peoria).
Interns manao asa isan-karazany amin'ny Prairie State miankina amin'ny traikefa niainany sy ny filan'ny birao na tetik'asa iray manokana. Ireo mpampiofana ao Paralegal dia afaka manadihady mpanjifa, mandrafitra ny fangatahana, manao fikarohana ara-dalàna ary manampy ireo mpisolovava amin'ny fiomanana amin'ny fitsarana.
Prairie State dia mandray ny fangatahana fiofanana ho an'ny mpianatra avy amin'ny mpianatra ambaratonga voalohany na paralegal izay manana famatsiam-bola ivelany na mitady mari-pankasitrahana any an-tsekoly, na maniry ny hanao an-tsitrapo ny fotoanany. Mampalahelo fa tsy afaka manolotra fiofanana ho an'ny mpianatra ho an'ny mpianatra ambaratonga voalohany sy paralegal izahay.
Mifandraisa amin'ny talen'ny serivisy misahana ny asa an-tsitrapo ao amin'ny Prairie State raha mila fanazavana fanampiny. (mailaka: [email voaaro])
AZAFADY AZA ATAO: Izahay dia tsy mandray fangatahana mpianatra ho mpianatra vao mianatra na paralegal raha tsy manokatra ny biraonay izahay, satria ny ankamaroan'ny mpiasa dia miasa hatrany lavitra noho ny areti-mandringana COVID-19.
"Tsy azo atao ny manohana ny rariny ho an'ny sasany ary tsy manohana ny rariny ho an'ny olon-drehetra." - Martin Luther King Jr.	... See MoreJereo ny Less